Sep 7, 2019 09:30:00
မောင်ပွ တစ်ယောက် ရင်တွေ ပရမ်းပတာ ခုန်နေ၏။ ရည်းစားဆီက အဖြေရခါနီးမို့လား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဘ၀အတွက် အရေးကြီးသော အလုပ်အကိုင်ရရှိရင်အတွက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် အခန်းအပြင်ဘက်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သည်အလုပ်ရဖို့အတွက် မောင်ပွ နယ်မှ ရန်ကုန်သို့ တက်ကာ အင်တာဗျူး လာဖြေခြင်း ဖြစ်လေရာ နယ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ ကျန်ရှိခဲ့လေသည်။ အရှေ့က ဖြေဆိုနှင့်ပြီးသော လူများကတော့ ထွက်လာကြသည်မှာ မျက်နှာမကောင်းကြ ။ မောင်ပွသည် ဘုရားစာ ရွတ်နေရုံက လွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်။
ဟော အခန်းထဲမှ မောင်ပွအား အထဲဝင်ရန် အချက်ပေးဘဲလ်သံ ထွက်ပေါ်လာချေပြီ။ မောင်ပွ မျက်နှာပေါ်တွင် ပြန်နေသော အဆီများကို ပုဆိုးနှင့် ပွတ်လိုက်သည် ထို့နောက် ပုဆိုးပြင်ဝတ်ကာ ခန်းဆီးလေးအား မ အထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်သည်။ အခန်းထဲတွင် လူကြီးသုံးယောက်ထိုင်နေသည်။
“ ကဲ… အခြေခံအချက်လေးတွေ အရင်မေးရအောင် ၊ နာမည်လေး ပြောပါဦး “
“ မောင်ပွပါ ခင်ဗျာ “
“ ဘာလို့ အဲ့ဒီနာမည် ပေးထားတာလဲ”
“ ငင်… ဟုတ်လား ၊မှန်း….ဟုတ်သား အကြီးကြီးပဲညော်”
“ ဟွတ် နှာခေါင်းပွတော့ အောက်စီဂျင်ကို ပိုဝင်တာပေါ့ခင်ဗျာ”
“ ငင့်…ဟုတ်လို့လား၊အိမ်က မိန်းမလည်း နှာခေါင်းပွပါတယ်။သူ့ကျတော့ ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါသည်”
“ ဟွတ်….သူက ရိုးရိုးပွလို့ နေမှာပါ ၊ ကျွန်တော်ကရှယ်ပွလေ”
“ ငင့်…အဲဒီလို ရှိသေးတာလား၊ ကဲ ကဲထားပါလေ၊ ဆက်မေးရအောင် အဖေ အမေ နာမည်လေး ပြောပါဦး”
“ ဦးလေအိုး ၊ ဒေါ်ပဲလှော်”
“ ငင်…မျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ ပွပေတာကိုး၊ ဒါနဲ့ နေပါဦး၊ဒီမှာ ရေးထားတာက မိဘနာမည် ဦးဆာဒူး၊ ဒေါ်မှန်ချိုဆို လွဲနေပါ့လား”
“ ငင်…ဟုတ်ပါဘူး၊ ဦးလေအိုး၊ဒေါ်ပဲလှော်လေ”
“ ဟ….ဒီိမှာရေးထားတာက ဦးဆာဒူး ၊ဒေါ်ပဲလှော်လေ”
“င့င်…ဘုရား၊ဘုရား။ Crossing ကြီး ပြောနေပါလား။ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ၊ဦးလေအိုး ဒေါ်မှန်ချိုပါ။ ငင်..ငါပါ လွဲပြီ၊ ခွင့်လွတ်ပါတော့ အဖေ”
“ ကဲ…ဒုက္ခပဲ၊ ဒီလို အသေးအဖွဲလေးကအစ လွဲနေရင်တော့ ပြဿနာပဲ”
“ တကယ်ပါဗျာ၊ယုံပါ၊ ဦးလေအိုး၊ ဒေါ်ပဲလှော်”
“ အေးလေ၊အဲဒါက မင်းအပြောကိုး၊ ဒီမှာရေးထားတာက ဦးပဲလှော်၊ဒေါ်လေအိုးလေ”
“ ကဲ…မောင်ရင် ၊နောက်ဆို ဖောင်ဖြည့်ရင် သေသေချာချာ ဖြည့်လေကွာ။ ဒီလိုကိစ္စတွေပါ လိုက်မှားနေရင်တော့ နောက်ဆို ဒီထက်ကြီးလေးတဲ့ တာဝန်တွေ ပေးလာလို့ လွဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ အခုပဲကြည့်၊ မောင်ရင်ပြောတော့ နာမည်က တစ်မျိုး ၊ဒီမှာ ရေးထားတာက ဦးလေပဲ၊ ဒေါ်အိုးလှော် တဲ့”
“ ငင့်….ဒါဆို စုံတွဲအသစ်လား”
“ ငင့်…. ဟုတ်လား ၊မှားလို့၊ ဦးဆာအိုး၊ ဒေါ်မှန်လှော်ပြောတာ”
“ ငင့်…ခုနက ဒီစုံတွဲ မပါပါလား။ဘုရား ဘုရား၊ ကျွန်တော့် မိဘ ရှစ်ယောက်လောက် ဖြစ်နေပါရော့လား”
“ အေးလေကွာ….ငါတို့လည်း ရောကုန်ပြီ။ ကဲ….တကယ်က ဦးဆာဒူး၊ ဒေါ်လေအိူး မဟုတ်လား”
“ ငင့်…ဘုရား ဘုရား၊လုပ်ပြန်ပြီ ။ ကျွန်တော့် အဖေက အနောက်ရောက်သွားပြန်ပြီ ။အရှေ့ပြန်တင်ပေးပါ”
“ ဒါဆို ဦးလေအိုး၊ ဒေါ်ဆာဒူးလား”
“ ခွီးးးးးးးး လည်ကုန်ပြီ။ ကျွန်တော့်မိဘ နာမည်တွေက ဘာတွေလဲဟင်”
“ သြော်….မှတ်မိပြီ ။ဦးပွ ၊ဒေါ်ဆာဒူး”
“ ငင့်…ဒါကြီးက ပိုကြမ်းတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘနာမည်က ဒေါ်ဆာဒူး မဟုတ်ဘူးလေ။ ပြီးတော့ ဦးဆာဒူး မဟုတ်ဘူးလား။ ယောက်ျားချင်းကြီးဗျာ”
“ အားးးးးဆောရီး ဆောရီး ။ငါဖတ်နေတာက အပေါ်က တစ်ယောက်ရဲ့ မိဘနာမည်တွေပဲ စာလုံးတွေကသေးတော့ အပေါ်အောက် ရောသွားတာ ဆောရီးညော်”
“ငင့်…. တော်သေးတာပေါ့ ။မဟုတ်ရင် ကျွန်တော့် အဖေခမျာ ပုဆိုး ပြေး ဝတ်လိုက်၊ ထဘီ ပြေးဝတ်လိုက်နဲ့”
သို့နှင့် အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြေပြီးသကာလ ကြောက်တောင်တောင်နှင့် အင်တာဗျူး အောင်သွားလေရော ။ နယ်တွင်ရှိသော မိန်းမထံသို့ ဖုန်းဆက်ရန် ဖုန်းဆိုင်ရှိရာသို့ အပြေးသွား-
“ ဟလို….ဟလို၊ မိန်းမလား။ဟားးးး မိန်းမရေ ၊ ယောက်ျား အလုပ်ရပြီ အားကြီးလွမ်း၊သောက်ရမ်းချစ်၊ အာဘွားတွေ အပြွတ်လိုက်ပေးချင်နေတာ။ မိန်းမရာ ယောက်ျားကို အာဘွား မပေးချင်ဘူးလားငင်၊ အဟွတ်ဟွတ်”
“ အခုပြောနေတာ မောင်ပွလား၊အေး..အန်တီပါ”
“ ငင့်…ယောက္မ၊ ဘုရား ဘုရား ၊ ကန်တော့ပါ အန်တီ”
“ ခဏလေး မင်းမိန်းမ လာပြီ”
“ မဒမ်ပွ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၂/ ဘာညာ နိုင် ၀၀၇”
“ အိုခေ ၊ ဒါဆို ငါ့မိန်းမ သေချာပြီ ၊အမယ်လေး….မိန်းမရယ် ၊လွမ်းထှာ၊အာမွှား အာမွှား အဟွင်းဟွင်း “
“ မောင်ပွလား အေး…အန်တီပါ”
“ ငင်…လာပြန်ပြီ ၊ယောက္မမ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်လာရပြန်တာတုံး”
“ အေး…မင်းပြန်လာရင် အန်တီိ့အတွက် သွေးကျဆေးလေး ၀ယ်လာပါကွယ်။ အာ့လေးပြောမလို့”
“ ဟွတ် ဟွတ်”
“ ပြော ယောက်ျား “
“ မိန်းမ ဒီတစ်ခါတော့ မင်းဆိုတာ သေချာပါပြီနော်”
“ သြော်…ကျုပ်မှ ကျုပ် အစစ်ပါတော် ၊ပြော”
“ မိန်းမကို လွမ်းရို့ ချစ်ရို့ အာ့ပြောမရို့ ….ငိငိ “
“ မောင်ပွလား အန်တီပါ”
“ ပြန်လာရင် ဂျေဒိုးနတ်လေး ၀ယ်ခဲ့လို့ ပြောမလို့”
“ ဟွတ် ဟွတ် “
“ ပြော ယောက်ျား”
“ မိန်းမ မင်းအမေး ထွက်သွားတာ သေချာပြီနော်”
“ သြော်…အခုပဲ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားပါပြီတော်”
“ ဟူးးးးးး မိန်းမရယ်၊ တကယ်ကျောတာ တိရား၊ မိန်းမကို ရွှတ်ရှလူးလူးလူးလူး”
“ ငင် “
(တချို့နေရာများသည် ဆရာ ကြပ်ကလေး ရေးသားခဲ့သော ‘ မမှားတဲ့ဖိတ်စာ’ ၀တ္ထုတိုမှ ဇာတ်ကွက်များအား မှီငြမ်းထားပါသည်။)
မောငျပှ တဈယောကျ ရငျတှေ ပရမျးပတာ ခုနျနေ၏။ ရညျးစားဆီက အဖွရေခါနီးမို့လား ဆိုတော့ မဟုတျဘူး။ သူ့ဘဝအတှကျ အရေးကွီးသော အလုပျအကိုငျရရှိရငျအတှကျ အငျတာဗြူးဖွဆေိုရနျ အခနျးအပွငျဘကျတှငျ စောငျ့ဆိုငျးနရေခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ သညျအလုပျရဖို့အတှကျ မောငျပှ နယျမှ ရနျကုနျသို့ တကျကာ အငျတာဗြူး လာဖွခွေငျး ဖွဈလရော နယျတှငျ ဇနီးဖွဈသူ ကနျြရှိခဲ့လသေညျ။ အရှကေ့ ဖွဆေိုနှငျ့ပွီးသော လူမြားကတော့ ထှကျလာကွသညျမှာ မကျြနှာမကောငျးကွ ။ မောငျပှသညျ ဘုရားစာ ရှတျနရေုံက လှဲပွီး ဘာမှ မတတျနိုငျ။
ဟော အခနျးထဲမှ မောငျပှအား အထဲဝငျရနျ အခကျြပေးဘဲလျသံ ထှကျပျေါလာခပြွေီ။ မောငျပှ မကျြနှာပျေါတှငျ ပွနျနသေော အဆီမြားကို ပုဆိုးနှငျ့ ပှတျလိုကျသညျ ထို့နောကျ ပုဆိုးပွငျဝတျကာ ခနျးဆီးလေးအား မ အထဲသို့ လှမျးဝငျလိုကျသညျ။ အခနျးထဲတှငျ လူကွီးသုံးယောကျထိုငျနသေညျ။
“ ကဲ… အခွခေံအခကျြလေးတှေ အရငျမေးရအောငျ ၊ နာမညျလေး ပွောပါဦး “
“ မောငျပှပါ ခငျဗြာ “
“ ဘာလို့ အဲ့ဒီနာမညျ ပေးထားတာလဲ”
“ ငငျ… ဟုတျလား ၊မှနျး….ဟုတျသား အကွီးကွီးပဲညျော”
“ ဟှတျ နှာခေါငျးပှတော့ အောကျစီဂငျြကို ပိုဝငျတာပေါ့ခငျဗြာ”
“ ငငျ့…ဟုတျလို့လား၊အိမျက မိနျးမလညျး နှာခေါငျးပှပါတယျ။သူ့ကတြော့ ပနျးနာရငျကပျြ ရောဂါသညျ”
“ ဟှတျ….သူက ရိုးရိုးပှလို့ နမှောပါ ၊ ကြှနျတျောကရှယျပှလေ”
“ ငငျ့…အဲဒီလို ရှိသေးတာလား၊ ကဲ ကဲထားပါလေ၊ ဆကျမေးရအောငျ အဖေ အမေ နာမညျလေး ပွောပါဦး”
“ ဦးလအေိုး ၊ ဒျေါပဲလှျော”
“ ငငျ…မြိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ ပှပတောကိုး၊ ဒါနဲ့ နပေါဦး၊ဒီမှာ ရေးထားတာက မိဘနာမညျ ဦးဆာဒူး၊ ဒျေါမှနျခြိုဆို လှဲနပေါ့လား”
“ ငငျ…ဟုတျပါဘူး၊ ဦးလအေိုး၊ဒျေါပဲလှျောလေ”
“ ဟ….ဒီမှာရေးထားတာက ဦးဆာဒူး ၊ဒျေါပဲလှျောလေ”
“င့ငျ…ဘုရား၊ဘုရား။ Crossing ကွီး ပွောနပေါလား။ မဟုတျပါဘူး ခငျဗြာ ၊ဦးလအေိုး ဒျေါမှနျခြိုပါ။ ငငျ..ငါပါ လှဲပွီ၊ ခှငျ့လှတျပါတော့ အဖေ”
“ ကဲ…ဒုက်ခပဲ၊ ဒီလို အသေးအဖှဲလေးကအစ လှဲနရေငျတော့ ပွဿနာပဲ”
“ တကယျပါဗြာ၊ယုံပါ၊ ဦးလအေိုး၊ ဒျေါပဲလှျော”
“ အေးလေ၊အဲဒါက မငျးအပွောကိုး၊ ဒီမှာရေးထားတာက ဦးပဲလှျော၊ဒျေါလအေိုးလေ”
“ ကဲ…မောငျရငျ ၊နောကျဆို ဖောငျဖွညျ့ရငျ သသေခြောခြာ ဖွညျ့လကှော။ ဒီလိုကိစ်စတှပေါ လိုကျမှားနရေငျတော့ နောကျဆို ဒီထကျကွီးလေးတဲ့ တာဝနျတှေ ပေးလာလို့ လှဲရငျဘယျလိုလုပျမလဲ၊ အခုပဲကွညျ့၊ မောငျရငျပွောတော့ နာမညျက တဈမြိုး ၊ဒီမှာ ရေးထားတာက ဦးလပေဲ၊ ဒျေါအိုးလှျော တဲ့”
“ ငငျ့….ဒါဆို စုံတှဲအသဈလား”
“ ငငျ့…. ဟုတျလား ၊မှားလို့၊ ဦးဆာအိုး၊ ဒျေါမှနျလှျောပွောတာ”
“ ငငျ့…ခုနက ဒီစုံတှဲ မပါပါလား။ဘုရား ဘုရား၊ ကြှနျတေျာ့ မိဘ ရှဈယောကျလောကျ ဖွဈနပေါရော့လား”
“ အေးလကှော….ငါတို့လညျး ရောကုနျပွီ။ ကဲ….တကယျက ဦးဆာဒူး၊ ဒျေါလအေိူး မဟုတျလား”
“ ငငျ့…ဘုရား ဘုရား၊လုပျပွနျပွီ ။ ကြှနျတေျာ့ အဖကေ အနောကျရောကျသှားပွနျပွီ ။အရှပွေ့နျတငျပေးပါ”
“ ဒါဆို ဦးလအေိုး၊ ဒျေါဆာဒူးလား”
“ ခှီးးးးးးးး လညျကုနျပွီ။ ကြှနျတေျာ့မိဘ နာမညျတှကေ ဘာတှလေဲဟငျ”
“ သွျော….မှတျမိပွီ ။ဦးပှ ၊ဒျေါဆာဒူး”
“ ငငျ့…ဒါကွီးက ပိုကွမျးတယျ။ ကြှနျတေျာ့မိဘနာမညျက ဒျေါဆာဒူး မဟုတျဘူးလေ။ ပွီးတော့ ဦးဆာဒူး မဟုတျဘူးလား။ ယောကျြားခငျြးကွီးဗြာ”
“ အားးးးးဆောရီး ဆောရီး ။ငါဖတျနတောက အပျေါက တဈယောကျရဲ့ မိဘနာမညျတှပေဲ စာလုံးတှကေသေးတော့ အပျေါအောကျ ရောသှားတာ ဆောရီးညျော”
“ငငျ့…. တျောသေးတာပေါ့ ။မဟုတျရငျ ကြှနျတေျာ့ အဖခေမြာ ပုဆိုး ပွေး ဝတျလိုကျ၊ ထဘီ ပွေးဝတျလိုကျနဲ့”
သို့နှငျ့ အိုးနငျးခှကျနငျး ဖွပွေီးသကာလ ကွောကျတောငျတောငျနှငျ့ အငျတာဗြူး အောငျသှားလရေော ။ နယျတှငျရှိသော မိနျးမထံသို့ ဖုနျးဆကျရနျ ဖုနျးဆိုငျရှိရာသို့ အပွေးသှား-
“ ဟလို….ဟလို၊ မိနျးမလား။ဟားးးး မိနျးမရေ ၊ ယောကျြား အလုပျရပွီ အားကွီးလှမျး၊သောကျရမျးခဈြ၊ အာဘှားတှေ အပွှတျလိုကျပေးခငျြနတော။ မိနျးမရာ ယောကျြားကို အာဘှား မပေးခငျြဘူးလားငငျ၊ အဟှတျဟှတျ”
“ အခုပွောနတော မောငျပှလား၊အေး..အနျတီပါ”
“ ငငျ့…ယောက်မ၊ ဘုရား ဘုရား ၊ ကနျတော့ပါ အနျတီ”
“ ခဏလေး မငျးမိနျးမ လာပွီ”
“ မဒမျပှ၊ မှတျပုံတငျအမှတျ (၁၂/ ဘာညာ နိုငျ ၀၀၇”
“ အိုခေ ၊ ဒါဆို ငါ့မိနျးမ သခြောပွီ ၊အမယျလေး….မိနျးမရယျ ၊လှမျးထှာ၊အာမှား အာမှား အဟှငျးဟှငျး “
“ မောငျပှလား အေး…အနျတီပါ”
“ ငငျ…လာပွနျပွီ ၊ယောက်မမ ဘယျကနေ ဘယျလိုရောကျလာရပွနျတာတုံး”
“ အေး…မငျးပွနျလာရငျ အနျတီိ့အတှကျ သှေးကဆြေးလေး ဝယျလာပါကှယျ။ အာ့လေးပွောမလို့”
“ ဟှတျ ဟှတျ”
“ ပွော ယောကျြား “
“ မိနျးမ ဒီတဈခါတော့ မငျးဆိုတာ သခြောပါပွီနျော”
“ သွျော…ကြုပျမှ ကြုပျ အစဈပါတျော ၊ပွော”
“ မိနျးမကို လှမျးရို့ ခဈြရို့ အာ့ပွောမရို့ ….ငိငိ “
“ မောငျပှလား အနျတီပါ”
“ ပွနျလာရငျ ဂဒြေိုးနတျလေး ဝယျခဲ့လို့ ပွောမလို့”
“ ဟှတျ ဟှတျ “
“ ပွော ယောကျြား”
“ မိနျးမ မငျးအမေး ထှကျသှားတာ သခြောပွီနျော”
“ သွျော…အခုပဲ အခနျးထဲ ပွနျဝငျသှားပါပွီတျော”
“ ဟူးးးးးး မိနျးမရယျ၊ တကယျကြောတာ တိရား၊ မိနျးမကို ရှတျရှလူးလူးလူးလူး”
“ ငငျ “
(တခြို့နရောမြားသညျ ဆရာ ကွပျကလေး ရေးသားခဲ့သော ‘ မမှားတဲ့ဖိတျစာ’ ဝတ်ထုတိုမှ ဇာတျကှကျမြားအား မှီငွမျးထားပါသညျ။)
အပတ်စဉ် အသစ်သစ်သော ပရလောက ၀တ္ထုတိုများကို "ဘေလ်မကုန် ၊ ၀န်ဆောင်ခပေးစရာမလို ၊ အင်တာနက်ဘေလ် လုံးဝ မကုန်ဘဲ " ဆက်လက်ဖတ်ရှုဖို့ လိုတရ အယ်လီကေးရှင်းကို ဒီလင့်ခ် ကနေနှိပ်ပြီး (အခမဲ့) ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲထားဖို့ လိုမယ်နော်။